Fivezọ ise iji nye omenaala n’usoro azụmaahịa gị | Martech Zone
Fivezọ ise iji nye omenala na usoro azụmaahịa gị
Tuesday, July 17, 2012 Tuesday, July 17, 2012 Breena Fain
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ele ọdịbendị ha n'ọtụtụ buru ibu, na-ekpuchi nzukọ ahụ dum. Agbanyeghị, ọ dị mkpa itinye omenaala akọwapụtara nzukọ gị n'ọrụ niile dị n'ime ya, gụnyere ndị ahịa gị. Ọ bụghị naanị na ọ na-etinye usoro gị na ebumnuche ụlọ ọrụ gị dum, mana ọ na-esetịpụrụ ụkpụrụ maka ngalaba ndị ọzọ ịgbaso otu.
Ndị a bụ ụzọ ole na ole usoro azụmaahịa gị nwere ike isi gosipụta ọdịbendị nzukọ gị:
1. Ahọpụta onye ndu ọdịnala.
ebe a naMpempe akwụkwọ , anyị goro onye ọrụ naanị ya bụ iji hụ na a kwadoro ụkpụrụ ọdịnala anyị. Ee, ama m, ọ gaghị ekwe omume ịme ihe a mgbe niile. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwere onye na ụlọ ọrụ gị nke gosipụtara mmasị n ’iburu ọrụ a, gbaa ha ume ma nọgide na-akwado ha! Ọ dị ezigbo mkpa na ị nwere onye nwere ike inye aka zụlite ọdịbendị ụlọ ọrụ gị. Enwere ike ịkọwa ihe ndị a dịka otu, mana enwere otu onye ga-ahụ maka ijide n'aka na otu a na-eme ụkpụrụ omume ndị a kwa ụbọchị. Omenala n'ime ụlọ ọrụ nwere ike ime ka ụlọ ọrụ nwee ọganiihu.
2. Mepụta ụkpụrụ ndị akọwapụtara.
Site na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ anyị maka iji ngwaahịa anyị, anyị na-arụ ọrụ n'okpuru ụkpụrụ "SAFE": Mfe, Agile, Fun, Mara mma. Developzụlite ụkpụrụ onwe gị maka azụmahịa gị na-enye ohere ka akụkụ niile nke ụlọ ọrụ gị dị ka ụkpụrụ ndị ahụ si dị. Ọ bụrụ na ndị ọrụ ejighị n'aka na ntụzịaka ha ma ọ bụ rapara na ọrụ, gwa ha ụkpụrụ gị bụ isi maka nduzi. Ndị a ekwesighi ịbụ ndị ọka mmụta na - enweghị oke - dị ka SAFE, naanị ụkpụrụ ole na ole nwere ike ịba uru n'ọtụtụ ọnọdụ.
3. Tinyegharịa. Tinyegharịa Tinyegharịa
Site na nzụlite mmepe ruo ụzọ ịmalite, ụkpụrụ ụkpụrụ gị kwesịrị ijide ọnụnọ siri ike. Zọ kachasị mma iji kwenye na njirimara ụlọ ọrụ gị na-agbanwe agbanwe bụ ịlaghachi ha kwa ụbọchị. Mgbe ị na-ebute mkpọsa ahịa ọhụrụ ma ọ bụ ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ, gbaa mbọ jụọ ndị otu gị, sị, “Kedu ka ngwaahịa a, ọrụ aka, usoro ya, wdg siri mezie usoro‘ SAFE ’anyị?”
4. Echefula banyere ọrụ ndị ahịa.
Ndị ahịa gị kọwaa ụlọ ọrụ gị. Mee ka ha mara na obi dị ha ụtọ. Ọ dị mma ịgbaso “Goldenkpụrụ Ọma” ahụ - mesoo ndị ọzọ ka ị ga-achọ ka e mesoo gị. Nwere ike ọ bụghị mgbe niile nwere azịza ndị ahịa gbara ajụjụ ma ọ bụ nwere ihe ngwọta maka nsogbu ndị ahịa; kwuo eziokwu ma mesie ha obi ike na ị ga-ahụ onye ga-enyere ha aka.
5. Tinye ihu na ika.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ma oge ụfọdụ, amaghị aha nwere ike ime ka ọ dị ka tweets gị na-akpaghị aka na azịza gị bụ mkpọ. Ọ dị mma itinye mgbakwunye na njirimara mmekọrịta. Ndị ahịa nwere ike nwee ahụ iru ala karịa ịma na ha na-agwa onye dị adị; onye ha nwere ike ịkọ na jikọọ na. Nke a nwere ike iduga ntụkwasị obi ndị ahịa maka ụlọ ọrụ gị. Anyị niile bụ mmadụ, ka anyị mee dịka ya!
Ndụmọdụ ndị a abụghị naanị maka ndị ahịa gị. Ngalaba ndị ọzọ nwere ike iji ha rụọ ọrụ, yana ụlọ ọrụ gị niile. Site na ịmepụta na ijikọta ọdịnala na ụlọ ọrụ gị, ị mepụtara gburugburu ebe obibi na-agba ume ịrụkọ ọrụ ọnụ ma na-enye ndị ahịa gị ohere ka ha jikọta mmadụ na ụdị gị.
Tags: Ụkpụrụ kachasị eluOnye ndu OmenalaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịamarketing atụmatụ
Breena Fain bụ PR & Marketing Specialist na Formstack, onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị nke ghọrọ onye ndu na ịmepụta, ijikwa, na nnabata ụdị ntanetị. Formstack na-enye azụmaahịa ụdị niile na nha ụdị ngwa ngwa ngwa dị mfe iji nweta ma chịkọta data. Ndị ọrụ nwere ike itinye ụdị dị na weebụsaịtị ha maka ijide ndu ngwa ngwa. Typedị ntụgharị a na-enyere ndị otu, ọkachasị obere ụlọ ọrụ, aka ime ka usoro azụmaahịa ya dị mfe ma na-agbasawanye akụ ya.
Mmekọrịta Mmekọrịta site na iji TWiki Workspaces
Ihe ngosi: Ibanye na ndi mmadu - The Business Edition